Attletico Madrid 4 Chelsea 1 Faah faahin iyo sawiro
Gooldhaliyaha weyn ee wadanka Comombia Falcao ayaa koxdiisa Attletico Madrid ineey ku guuleeysato Koobka Super Cup-ha yurub,kadib markii uu awoodiisa xirfadeed ku tijaabiyay shabaqada Chelsea isagoo akdhaliyay 3gool oo xiriir ah,Attleticomadrid ayaa xalay guul taariikhi ah kagaartay Chelsea kadib ciyaar ay kuwada yeesheen garoonka Luwis2 ee magaalada Monaco taasoo kusoo dhamaatay 4/1.
Ciyaaryahanada Attletico madrid ayaa ahaa kuwo kubada udiiday Chelsea oo sideey doonaan kasameeysanayay iyadoo ciyaaryahanada Chelsena ay ku guul dareeysteen ineey waardiyeeyaan weeraryahanka Falcao ooba kusigtay inuu fadeexad tii ugu xumeyd dusha usaaro Chelsea qaybtii hore ee ciyaarta hadii uusan kubado badan kabadbaadin lahayn goolhaye Cech.
Ciyaaryahnada Attletico ayaa waxay ahaayeen kuwo si dhaqso ah isula qabsanayay isuna fahansanaa iyagoo xadeeyay qatarta sadex geesoodka ahayd ee Chelsea kuwaasoo kala ahaa Torres,Matta IYO Hazard,majirin xitaa hal kubad oo halis ahayd oo uu lakulmay goolhayaha Attletico madrid.
Bilawgii ciyaarta markeey socotay 4daqiiqo ayaa wiilasha Diego Simoni waxay heleen fursad aad halis u ahayd taaso uu birta goolka ku dhuftay Falcao,taasna waxay digniin u ahayd Chelsea waxa kusoo socda,laakiin 3daqiiqo kadib ayaa mar labaad waxaa baas qurxan dhinaca midig ka keenay ciyaaryahanka garabka uga ciyaara Attletico ee Gabbi taasoo ku dhacday difaacyada Chelsea kadibna kubadii waxay utagtay Falcao kadibna siwanaagsan oo xirfad ku dheehantahay ayuu udaba mariyay goolhayaha Chelsea Peter Cech.
Goolkaas koowaad ayaa Chelsea ka qalday xisaabtii waxayna dhamaantood noqdeen kuwo niyad jabsan oo aadba mooday garoonka ineey ka ahaayeen daawadayaal oo kaliya,wiilka ay dhowaan kala soo wareegeen horyaalka faransiiska Edin Hazard ayaa mar isku dayay inuu dhaliyo gool uu kasoo laaday banaanka diilinta 18aad lakiin ma noqon mid guuleeysta oo kor ayay martay kubaddii.
Daafacyada Chelsea ayaa xalay waxay umuuqdeen kuwo aad utabar daran iyadoo dhowr marna ay kusigteen in laga dhaliyo goolal waxaana ugu darnaa kubad uu mar dhinaca bidix kakeenay Adrian Lopez waxaana madaxa lahelay wiilka Reer Turki Ardo Turan laakiin waxay martay goolka dhinaciisa.
Daqiqiadii 19 aad ayaa mar labaad waxaa jaanis helay Gool magafaha reer Colombia Falcao oo kubad aad uquruxbadnayd daba mariyay goolhayaha Chelsea sidaana ciyaarta waxay kunoqtay 2/0.
Daafacyada Chelsea ayaa xalay ahaay kuwo aad ukala furfuran waxaana aad loo tabay maqnaashiyaha kabtanka kooxda Terry iyadoo wiilka reer Brazil Luwis uuba uqalmay in loo magacaabo ciyaaryahankii ugu xumaay ciyaarta maadaama uu galay dhowr qalad sababna u ahaay guuldarada Chelsea.